Accueil > Gazetin'ny nosy > Ntsay Christian : Hotsaraina amin’ny alatsinainy
Telo taona sy efa-bolana izao no naha-Praiminisitra an’i Ntsay Christian. Roa volana mahery kely kosa ny firafitry ny governemanta tarihiny amin’izao fotoana. Ny antsasaky ny mpikambana ao amin’ny Governemanta ankehitriny dia vaovao avokoa, ary ny ampahatelony eo dia efa tao fa nafindra departemanta ministerialy.
Raha tsy misy ny fiovana dia hifanatrika amin’ny solombavambahoaka mandrafitra ny Antenimierampirenena ny Praiminisitra Ntsay Christian sy ny mpikambana mandrafitra ny governemanta tarihiny ny alatsinainy ho avy izao. Endrika fitsarana imasom-bahoaka io, izay hifanazavan’ny mpanatanteraka ny nataony sy ny hiatrehany ny famahana ny olana misy any amin’ny vahoaka. Tsy afaka mialokaloka ao anatin’ny aretina covid 19 intsony ny governemanta amin’ity indray mitoraka ity ka hoe “aleo ady hevitra amin’ny fitaovam-pifandraisan-davitra (visioconference) no hatao”.
Ny mampanahiran-tsaina ny mpanara-maso ny raharaham-pirenena amin’ny fifanatrehan’ny solombavambahoaka amin’ny mpikambana ao amin’ny governemanta toa izao dia matetika mihanahana fotsiny ny maro amin’ireo solombava izay tsy mahay akory na ny mametraka ny tenany amin’ny maha-solombavambahoakan’i Madagasikara azy aza. Zary solombavan’ny distrika nahavoafidy azy izy ka tsy mahafantatra akory ny fivoaran’ny raharaham-pirenena.
Efa nambaranay teto fa raha ny fihetsiky ny maro amin’ireo solombava mandrafitra ny Antenimierampirenena no asian-teny dia talem-paritry ny ministera mbamin’ny lehiben’ny distrika no tokony miatrika azy ireo fa tsy minisitra. Mampalahelo.
Etsy ankilany, satria moa nisy ny fihaonana mialoha teo amin’i Mahazoarivo sy ny solombava avy amin’ny mpiara-dia amin’ny fitondrana ny alakamisy teo, dia azo antoka koa fa “fitsarana propagandy” no hitranga. Izany hoe fitorahana voninkazo ny governemanta no ho maro ao. Mbola ho lavitry ny afo ny kitay raha miandrandra izany tena fifandanjam-pahefana izany isika ka hoe “tena tompon’andraikitra politika eo anoloan’ny depiote ny governemanta ary tena mpanara-maso ny asan’ny governemanta ny depiote”.